Vista Mon Apr 25, 05:19:00 PM GMT+8
ဟိဟိ ကိုကို ဒီဘီအေ ဆို အမွှာဗိုက်ကြီးဆို ခွဲချင်မှာ လိုက်မသွားနဲ့ နော်
Anonymous Mon Apr 25, 05:41:00 PM GMT+8
Cameron Mon Apr 25, 06:00:00 PM GMT+8
မမင်း Mon Apr 25, 06:02:00 PM GMT+8
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆို ဒါမျိုးတွေ မဖတ်ဖြစ်လို့ပါ
ခနွဲ Mon Apr 25, 06:06:00 PM GMT+8
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Mon Apr 25, 07:15:00 PM GMT+8
ဝက်ဆလူး Mon Apr 25, 08:34:00 PM GMT+8
တီချစ်လဲ တတိထားနော် ဟက်ဟက် တော်နေ တထုထု လုပ်လိုက်မှဖြင့်
ကင်တပ်ကီကျောက် Tue Apr 26, 12:32:00 AM GMT+8
အားတိုင်း fb ပေါ်တက် ပွားနေသူတွေ လန့်ကုန်ကြပြီထင်တယ်
ညီလင်းသစ် Tue Apr 26, 06:03:00 AM GMT+8
fb မှာ ခရီးထွက်မယ့်အကြောင်း ရေးထားမိလို့ အိမ်မှာလူမရှိတုန်း သူခိုးက အေးအေးဆေးဆေး ဝင်ခိုးသွားတဲ့ ဇတ်လမ်းတွေလည်း ကြားဖူးတယ်၊ ကျနော်ကတော့ fb ကို ပစ်ထားတာ ကြာပြီ..။
အဖြူရောင်နတ်သမီး Tue Apr 26, 08:02:00 AM GMT+8
Nge Naing Tue Apr 26, 08:17:00 AM GMT+8
အရင်က Facebook မှာမိတ်ဆွေတွေက ဘလော့ဂါတွေနဲ့ အပြင်မှာ တကယ်သိတဲ့ မိတ်ဆွေတွေပဲ များပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘလော့ဂ်ဖတ်သူလို့ ယူဆပြီး လာ add တာကို လက်ခံထားတဲ့ မသိသူတွေလည်း ရှိလာတော့ အခု ဓါတ်ပုံတွေ အလွဲသုံးစား လုပ်ခံနေရ နာမည်ကို အလွဲသုံးစား အလုပ်ခံနေရတယ်။ မချစ်ကြည်အေး C-Box မှာ ကျွန်မ နာမည်နဲ့ လာရေးထားသလို တခြား C-Box တွေမှာလည်း လိုက်ရေးထားတာ တွေ့ရသလို တခြားနည်းတွေနဲ့လည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်အောင် ဒုက္ခပေးခံနေရတော့ အွန်လိုင်းပေါ်က ရတဲ့ဒုက္ခတွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ပို့စ်တခုတော့ တင်ဦးမယ်။ ဘုရားရှိခိုးရင် အွန်လိုင်းပေါ်ရ ရတဲ့ဒုက္ခများမှ အားလုံး ကင်းဝေးကြပါစေလို့ အပိုတခု ဆုတောင်းပေးရမလို ဖြစ်နေပြီ။
ပန်းချီ Tue Apr 26, 11:14:00 AM GMT+8
ဖြစ်ရလေ..ကျောချမ်းစရာမဟုတ်ပဲ ဗိုက်ချမ်းစရာဖြစ်နေပါပေါ့လား မရယ်..
KiKi Tue Apr 26, 12:53:00 PM GMT+8
ဖဘ ကြီး မှာ လည်း အကောင်း အဆိုး ဒွန်တွဲနေတာပါလား...
သတိထားအုံးမှ ပါ ပဲ..
SHWE ZIN U Tue Apr 26, 02:26:00 PM GMT+8
အင်း စိတ်ရူးပေါက်နေတဲ့ သူတွေပေါ့နော်
တီချမ်း Tue Apr 26, 04:47:00 PM GMT+8
မိုးနတ်မင်းကြီး က ကယ်မှာပါ ကြည့်မနေနပါဘူး
နံရံတွေမှာ နားတွေရှိသလို တရားဥပဒေတိုင်းမှာ ပေါင်ချိန်ရှိပါတယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးတာ ကောင်းတယ်
ဖြေးဖြေးပဲ ပြန်တော့မယ် လိုက်မပို့နဲ့တော့ ဗိုက်ချမ်းလို့....
ပျော်စေ ပျက်စေ ကလက်စေ
TZA Tue Apr 26, 09:54:00 PM GMT+8
သက်ဝေ Tue Apr 26, 10:58:00 PM GMT+8
ကြောက်စရာကြီး... မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ မမချစ်ကြည်ရှင့်...
Anonymous Tue Apr 26, 11:14:00 PM GMT+8
ဘီယာဗိုက်ကြီးကို အထဲထဲမှာ ကလေးလေးရှိတယ် အထင်နဲ့ အခွဲခံနေရဦးမယ် ----------------------
တီဇက်အေစို ခလေးလေး၁ယောက်၊ ကိုကြီးစို အပျိုဗိုက်၊ ကိုပေါစို အမြွှာ၊ ကိုဘွိုင်စို ၁မြွာခွဲ အမ်!!!!!!!!!!!!!!!!!
အမချစ် ဒီနေ့အရမ်း အရမ်းကံကောင်းနေတယ်မတ်ပါ (ခွေဖြူ စိတ်လိုလက်ရ လိုက်မန့်နေလို့)
တီဇက်အေလို နံမယ်ကြီး (မြောက်ပေးလိုက်အုန်းမယ်) ဘလောက်ဂါစီမာတောင် မမန့်တာကြာပေါ့ (စားစရာပုံတွေချည်းတင်နေတာ အမြင်ကတ်လို့)
Moe Cho Thinn Wed Apr 27, 12:47:00 PM GMT+8
ဒါတွေကို သိလို့ facebook account ကို deactivate လုပ်ပစ်လိုက်တာ.. တော်ကြာ ကလေးမရှိတဲ့ဗိုက် လာခွဲနေမစိုးလို့..:))
Mon Petit Avatar Wed Apr 27, 09:06:00 PM GMT+8
ဖဘ မရှိတဲ့ဘဝအေးချမ်းပါတယ်လေ တော်ကြာ blouse ပွပွဝတ်ထားတဲ့ပုံတင်မိရင် Congratulations! ဆိုလို့ ကျွန်မကရိုးရိုးဝတာပါလို့ ရှင်းနေရဦးမယ်